८.५% बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको सेन्ट्रल फाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ८.५% बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको सेन्ट्रल फाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 120 views
८.५% बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको सेन्ट्रल फाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण
चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले रू. २ करोड २६ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ४ दशमलव ९० प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको सञ्चालन नाफा र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ७२ प्रतिशतले बढेर रू. ५२ करोड ६ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १८ करोड १८ लाख छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १ सय १२ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको लगानी रू.२७ करोड २० लाख रहेको छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले फाइनान्स कम्पनीको पूँजी रू. ८० करोड पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि पूँजी रू. ७८ करोड ९ लाख पुग्नेछ । साथै कम्पनीले ८ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र रू. ३४ लाख ९३ हजार ९ सय २२ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको चैत ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
वर्गिकरणः वित्त कम्पनी
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ११९
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ११४
५२ हप्ताको न्युन व्यापार मूल्यः रू. २९२
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. १६४.७८
कम्पनीका महत्वपूर्ण अनुपात
अध्यक्षः सन्जोज मान श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः रजोज मान श्रेष्ठ
प्रधान कार्यालयः कुपण्डोल, ललितपुर
स्टक स्टिकरः सिएफसीएल
कम्पनीका महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा)
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ४ दशमलव ३४ प्रतिशतबाट घटेर ७ दशमलव १३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. २ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख निक्षेप सङ्कलन गरी रू.२ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. ४ करोड ७८ लाख, कर्मचारी खर्च रू.१ करोड ६५ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ९६ लाख ६८ हजार र सञ्चालन नाफा रू.२ करोड ६८ लाख रहेको छ ।
स्थिर सम्पत्ती १८ प्रतिशतले बढेर रू. ५ करोड ३४ लाख र सम्पत्ती ४७ प्रतिशले बढेर रू. १२ करोड ३३ लाख पुगेको छ ।
साथै कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थाको स्रोत सङ्कलन र परिचालनको दायरा अझ फराकिलो बनाउन उपत्यका बाहिर शाखा कार्यालय विस्तार गरी सेवा विस्तार गर्ने र कारोबारलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।
कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यबस्थामा रू.७९ लाख ८ हजार छुट्याएको छ भने पूँजी कोष पर्याप्तता २३ दशमलव ८४ प्रतिशत र कष्ट अफ फण्ड ९ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी अनुपात रू. ४ दशमलव ३४, मूल्य आम्दानी अनुपात रू. ३१ दशमलव ३३ र तरलता अनुपात ३० दशमलव ६८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३४ दशमलव ९१ रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको शून्य दशमलव ८८ गुणा बढी छ ।
खरीद चापः कम्पनीको बुधवार भएको शेयर कारोवारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे ७ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ३ हजार ८ सय ७० कित्ता शेयर खरीद र ५ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
बुधवार भएको शेयर कारोबार विवरणः
३ जनवरी २०१८ ४ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ५० दिनको कारोबारको हेर्दा अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५० दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन (३८ दशमलव ४४ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५० दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन ० दशमलव ९७ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५० दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एक आपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. १ सय १९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. १ सय २२ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. १ सय १७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल – १ को प्रतिएकाई खुद मूल्य रू. १०.३२
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १४:१७
सबै समूहको परिसूचक ओरालो लाग्दा नेप्से १८.०४ अङ्कले घट्यो (२ बजेको अपडेट)
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १४:११
७ कम्पनीको २ करोड १९ लाख शेयर सूचीकृत
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १४:०१
कञ्चनको चुक्तापूँजी ४६ प्रतिशत बढ्यो
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १३:४७
दक्ष जनशक्तिको अभाव र झन्झटिलो सरकारी अनुदानले पेचिलो बन्दै पुनर्निर्माण
विद्यार्थी भर्ना शून्य भएपछि स्थानीय तहले बन्द गरायो विद्यालय
जेठसम्म प्रदर्शन गर्न पाइने
नगरपालिकासँग सहमति नहुँदा केएफडब्लूले सम्पदा पुनःनिर्माणबाट हात झिक्यो
जनता बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानीमा २ गुणा वृद्धि
जानकी फाइनान्स ७ करोड ९२ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल